Aga m anọ na nnọkọ na Nzukọ TechPoint na Fraịde | Martech Zone
N'ụtụtụ a, Mark Gallo (Patronpath si Onye isi ala) kekọrịta oke edemede na Indianapolis Star banyere akụkọ ihe mere eme na ihe mgbaru ọsọ nke Techpoint, otu mpaghara teknụzụ nkwado ebe a na Indianapolis.
N'ụzọ na-eju anya, ndị nwere obiọma kpọrọ m oku na ya Bitwise Ngwọta ka ha buru ndi obia na nzuko TechPoint na Fraide a. Ekele dịrị Ron na Kim maka ọkpụkpọ òkù ahụ! Mark nyere m ụbọchị ezumike ịga ma enwere m ekele maka ya. Nke a bụ 'obere obodo' ma a bịa na teknụzụ, echere m na ọ dị mkpa na anyị jikọtara njikọ anyị na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ahụ maka teknụzụ yana ndị mbido ndị ọzọ!
Y’oburu na ino n’obodo ma iga na nzuko TechPoint, aga m ahu gi ebe ahu! Obi dị m ụtọ izute Jim Jay na netwọk na ndị isi mpaghara ndị ọzọ na ngalaba na-eto eto na teknụzụ ebe a na Indianapolis.
Tags: ihe ederedenyocha emailọdịnaya dị na mpụgafacebook mgbasa ozifacebook mgbasa ozi na-erifacebook mgbasa ozingwa facebookmiloMobile na Mbadamba ụrọSocial Media Marketingzoomerang
Onye njem uka nke ahia putara Coopetition
Nov 5, 2007 na 10:50 AM
Daalụ maka ịkọwa ya, amaghị m na ọ na-aga, ọ bụ ezie na agaghị m anọ n'ógbè ahụ n'oge ahụ, ọ bụrụ na m bụ, aga m aga. Scott
Nov 5, 2007 na 7:12 PM
Doug - agam agakwa… olile anya ihu gi ebe ahu! Anyị na Jim Jay na-arụ ọrụ iji kwado ndị Nna-ukwu nke Nzukọ Ọgbakọ Na-ahụ Maka Ahịa!
Nov 5, 2007 na 8:02 PM
Jim dị egwu! Ana m atụ anya ihe omume ahụ ma soro gị tụgharịa uche na gị.